Ubonga amaciko ngokumeseka esemanzini - Ilanga News
Home Izindaba Ubonga amaciko ngokumeseka esemanzini
Ubonga amaciko ngokumeseka esemanzini
Bebeyihlonipha imigomo ebekiwe ye-coronavirus
ABEPHUMILE amaciko ukuyophelezela uNkk Sindisiwe Makhathini ongunina kaMnu Lucky Makhathini ongumhleli wemicimbi, ikakhulukazi emayelana nomculo we-gospel. Kusuka kwesobunxele nguMoses Zikhali, Sipho Makhabane, Siyabonga Nxumalo, uThobekile Mkhwanazi, uPastor Mjosty noMfu Andile KaMajola. Olele phansi uBabo Ngcobo.
AKAWUVALI umlomo ngesenzo samaciko ehlukene amsingathe kukubi umhleli wemicimbi waseThekwini, uMnu Lucky Makhathini obefihla unina ngoMgqibelo, eMelmoth, lapho la maciko afike akhombisa khona ukubaluleka kokulandela imigomo ebekiwe ukugwema ukusabalala kwe-coronavirus.
Unina kaMnu Makhathini, uNkk Sindisiwe Millicent Makhathini (79), udlule emhlabeni ngoLwesihlanu olwedlule ngemuva kokugula isikhashana kanti amaciko amaningi abesemthathisa okukanina, emkhonzile.
Uthi kumuma-ngazile ukuthi yize izwe libhekene nesimo esinzima esidalwe yi-coronavirus kodwa amaciko amkhumbulile esemanzini.
“Siwumndeni wakwaMakhathini siyabonga kakhulu kulabo abaphume ngobuni-ngi babo ngisho isikhathi esikusona sinzima kangakanga.
“Ngibonga kusomahlaya uMjosty obephethe uhlelo enkonzweni kamama yokugcina,” kusho yena.
Uthi phakathi kwamaciko abekhona nguMfu Andile kaMajola, uBabo Ngcobo, uThobekile, uSipho “Big Fish” Makhabane, uPastor Ncanda, noMfu Vusi Dube we-Ethekwini Community Church (ECC) yodumo, ovamile ukuba noMnu Makhathini.
“Njengoba ngingumuntu osebenza kakhulu ekuhleleni imicimbi, ikakhulukazi yezokholo, amaciko amaningi bengijwayele ukuwahla-nganisa nomama, okwenze aphuma ngobuningi bawo.
“Nangemuva kokushona kwakhe, ngishayelwe ngamaningi engikhalisa,” kusho yena.
Uthi njengoba kunemibandela eminingi elandelwayo uma kungcwatshwa nabantu abawuhambele umngcwabo bengafanele badlule ku-50, baqinisekisile ukuthi abebekhona kabaseqanga lesi sibalo.
Previous articleBAPHAWULILE abafundi bethu ngongqimphothwe kahulumeni mayelana nokuvunyelwa ukuba ugwayi uthengiswe esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe (lockdown) njengoba ubuye wajika emnyango wathi amaxhwele mawagwInye itshe, ngeke awunuke:-
Next articleLuyinzukazikeyi olokuvulwa kwezikole